ပါဝါ အီလက်ထရွန်းနစ်. ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ် ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်စွ
ⓘ ပါဝါ အီလက်ထရွန်းနစ်. ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ် ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ထိန်းချုပ်ရန် သို့ အသွင်ပြောင်းလဲရန် အတွက် ဆောလစ်စတိတ် အီလက်ထရွန်းနစ် ကို အသုံးချခြင်းကို ..
ⓘ ပါဝါ အီလက်ထရွန်းနစ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ အသွင် ဗိုးတေ့၊ လျှပ်စီး၊ ကြိမ်နှုန်း စသည်တို့ကို အသွင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည့် အခါတိုင်းတွင် ပါဝါ အီလက်ထရွန်းနစ်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ထို ကွန်ဗာတာ များ၏ ပါဝါ ပမာဏမှာ မိုဘိုင်းဖုန်း များတွင် အသုံးပြုသော မီလီဝပ် အနည်းငယ်မျှသော ပမာဏမှစ၍ အိတ်ချ်ဗွီဒီစီ စနစ်များတွင် အသုံးပြုသော မီဂါဝပ် ရာပေါင်းများစွာ ရှိသော ပမာဏ အထိ တွေ့နိုင်သည်။ ပုံမှန် အီလက်ထရွန်းနစ်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းများ နှင့် ဗိုးတေ့ တို့သည် သတင်းအချက်အလက်များကို သယ်ယူလေ့ ရှိသော်လည်း ပါဝါ အီလက်ထရွန်းနစ်တွင်မူ ပါဝါကို သယ်ဆောင်ကြသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ပမာဏ efficiency သည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။
ပထမဆုံးသော ပါဝါ အမြင့်စား အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာမှာ မာကျူရီ အာ့ခ် ဘား များmercury arc valves ဖြစ်ကြသည်။ ခေတ်သစ်စနစ်များတွင်မူ ပါဝါပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းကို ဒိုင်အုတ်၊ သိုင်ရစ်စတာ နှင့် ထရန်စစ်စတာ အစရှိသော ဆီမီးကွန်ဒပ်တာ ခလုပ် ကိရိယာ များဖြင့် ဆောက်ရွက်ကြလေ့ရှိသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ် စနစ်များတွင် ဆစ်ဂနယ် နှင့် အချက်အလက်များကို ထုတ်လွှတ် ကိုင်တွယ် မှုများ ပြုလုပ်ကြလေ့ ရှိသော်လည်း ပါဝါ အီလက်ထရွန်းနစ် တွင်မူ ပမာဏ အတော်များသော လျှပ်စစ်ပါဝါ များကို ကိုင်တွယ်မှု ပြုကြသည်။ အေစီမှ ဒီစီသို့ ပြောင်းလဲသော ရက်တီဖိုင်ယာသည် ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာများ၏ ထင်ရှားသော သာဓကတစ်ခု ဖြစ်ပြီး လူသုံးများ အီလက်ထရွန်းနစ် ပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြသော တယ်လီဗွီးရှင်းများ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ ဘက်ထရီ အားသွင်းစက်များတွင် ပါဝင်လေ့ ရှိသည်။ ပါဝါ၏ ပမာဏမှာ ဆယ်ဂဏန်းမျှရှိသော ဝပ်မှ ရာဂဏန်းမျှ ရှိသော ဝပ်အထိ ဖြစ်သည်။ စက်ရုံများတွင် ထင်ရှားသော အသုံးချမှုမှာ အရှိန်ပြောင်းလဲ မောင်းနှင်ကိရိယာ variable speed drive ဖြစ်ပြီး အင်ဒပ်ရှင်း မော်တာများကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။
Wikipedia: ပါဝါ အီလက်ထရွန်းနစ်